သြစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန်၊ အမေရိက၊ အင်္ဂလန်၊ ပြင်သစ်၊ ကနေဒါနှင့်အခြားနိုင်ငံများစွာတွင်သိုးခြံများစွာရှိသည်။ အမှန်မှာ၎င်းသည်များစွာသောသိုးမြေ produces ဇာများထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ၎င်းတို့သည်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်ရန်အတွက်ကုန်ကြမ်းကောင်းများဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? သိုးမွေး quality အရည်အသွေးသည်တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးတွင်ပထမဆုံးဖြစ်သည်။ သိုးများကျက်စားရန်ရွေးချယ်ရာတွင်ဘူးသီးများ၊ နုသောမြက်ပင်များ၊ ပန်းများနှင့်အစိမ်းရောင်အရွက်များမှာနိုက်ထရိုဂျင်အာရုံစူးစိုက်မှုအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။
လတ်ဆတ်သောသိုးမြေ man ဇာတွင်ဖော့စဖရပ်၏ ၀.၄၆% နှင့်ပိုတက်စီယမ်၏ ၀.၂၃% ပါရှိသော်လည်းနိုက်ထရိုဂျင်ပါဝင်မှုသည် ၀.၆၆% ရှိသည်။ ၄ င်း၏ဖော့စဖရပ်နှင့်ပိုတက်ဆီယမ်ပါဝင်မှုသည်အခြားတိရစ္ဆာန်ချေးများနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများပါဝင်မှုသည် ၃၀% ခန့်အထိရှိသည်။ နိုက်ထရိုဂျင်ပါဝင်မှုသည်နွားမစင်တွင်ပါဝင်မှုထက်နှစ်ဆပိုများသည်။ ထို့ကြောင့်မြေ to ဇာတွင်သိုးမြေ applied ဇာတူညီသောပမာဏကိုအသုံးပြုသောအခါမြေသြဇာစွမ်းဆောင်ရည်သည်အခြားတိရစ္ဆာန်ချေးများထက်များစွာပိုမိုမြင့်မားသည်။ ၎င်း၏ဓာတ်မြေသြဇာအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်မြန်ဆန်ပြီးအ ၀ တ်အစားအတွက်သာသင့်လျော်သည်ပြိုကွဲပျက်စီးအချဉ်ပေါက် ဒါမှမဟုတ် ကျောက်မီးသွေး, မဟုတ်ရင်ပျိုးပင်များကိုမီးရှို့ရန်လွယ်ကူသည်။
သိုးသည်မွေးမြူသူဖြစ်သော်လည်းသောက်သုံးရေရှားပါးသောကြောင့်သိုးမြေ dry ဇာသည်ခြောက်သွေ့။ ကောင်းသည်။ မစင်ပမာဏလည်းအလွန်သေးငယ်သည်။ သိုးမြေ ure ဇာသည်အပူဓာတ်မြေသြဇာအဖြစ်မြင်းချေးနှင့်နွားမအကြားတိရစ္ဆာန်ချေးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သိုးချေးတွင်အာဟာရဓာတ်များစွာပါဝင်သည်။ ဒါဟာနှစ် ဦး စလုံးစုပ်ယူနိုင်သည့်ထိရောက်သောအာဟာရများသို့ဖြိုဖျက်ဖို့လွယ်ကူပေမယ့်လည်းပြိုကွဲရန်ခက်ခဲအာဟာရရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သိုးမြေ organic ဇာအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာသည်မြေဆီလွှာအမျိုးမျိုးအတွက်သင့်လျော်သောလျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ဓာတ်မြေသြဇာများပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အားဖြင့်သိုးချေးဇီဝဓာတ်မြေသြဇာကစော်ဖောက်ခြင်း အချဉ်ဖောက်ခြင်းကိုအစာကျွေးသောဗက်တီးရီးယားများ၊ ကောက်ရိုးကိုရိုက်ပြီးနောက်အပင်များ၌ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာရှုပ်ထွေးသောဘက်တီးရီးယားများသည်စွမ်းအင်ရှိသောအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာဖြစ်လာရန်အေရိုးဗစ်၊
သိုးစုထဲတွင်အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများပါဝင်မှုမှာ ၂၄% - ၂၇%၊ နိုက်ထရိုဂျင်ပါဝင်မှုသည် ၀.၇% - ၀.၈%၊ ဖော့စဖရပ်၏ပါဝင်မှုသည် ၀.၅၅% - ၀.၆%၊ ပိုတက်ဆီယမ်ပါဝင်မှုသည် ၀.၃% - ၀.၆%၊ သိုးများတွင်အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများ ၅%၊ နိုက်ထရိုဂျင်ပါဝင်မှု ၁.၃% မှ ၁.၄%၊ အလွန်သေးငယ်သောဖော့စဖရပ်စ်၊ ပိုတက်စီယမ်သည်အလွန်ပေါကြွယ်ဝပြီး ၂.၁% မှ ၂.၃% အထိရှိသည်။
သိုးချေးပေါင်းစပ် / ကစော်ဖောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်:
၁။ သိုးမြေ straw ဇာနှင့်ကောက်ရိုးမှုန့်အနည်းငယ်ရောနှောပါ။ ကောက်ရိုးမှုန့်ပမာဏသည်သိုးချေးအစိုဓာတ်အပေါ်မူတည်သည်။ အထွေထွေဆွေး / ကစော်ဖောက်ခြင်းတွင်အစိုဓာတ် ၄၅% လိုအပ်သည်။
၂။ ဇီဝရှုပ်ထွေးသောဘက်တီးရီးယား ၃ ကီလိုဂရမ်ကိုသိုးမြေ 1 ဇာတစ်တန်သို့မဟုတ် ၁.၅ တန်လတ်ဆတ်သောသိုးမွှေးသို့ထည့်ပါ။ ၁: ၃၀၀ အချိုးအစားဖြင့်ဘက်တီးရီးယားများကိုအရည်ပျော်ပြီးနောက်သင်မြေ the ဇာထဲမှသိုးချေးထဲသို့အညီအမျှဖျန်းနိုင်သည်။ ပြောင်းဖူး၊ ကောက်ရိုး၊ ခြောက်သွေ့သောမြက်ပင်စသည်တို့ကိုသင့်လျော်စွာထည့်ပါ။
3. ဒါဟာကောင်းတစ် ဦး တပ်ဆင်ထားပါလိမ့်မည် ဓာတ်မြေသြဇာရောနှော အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများနှိုးဆော်ရန်။ ရောနှောပိတ်ပင်တားဆီးမှုထွက်ခွာမယူနီဖောင်းဖြစ်ရမည်။
(၄) ကုန်ကြမ်းများအားလုံးကိုရောစပ်ပြီးသောအခါသင် windrow compost pile ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပုံ၏အကျယ်မှာ ၁.၀ မှ ၂.၀ မီတာအမြင့် ၂.၀ မှ ၃.၀ မီတာရှိသည်။ အရှည်အဘို့, ထက်ပို5မီတာသာ။ ကောင်း၏။ အပူချိန် 55 over ကျော်သောအခါ, သင်အသုံးပြုနိုင်သည်ဆွေး windrow Turner စက် ဒါကြောင့်ဖွင့်ရန်။
အသိပေးစာဖြေ - သင့်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်တချို့ရှိတယ် ဆွေးအောင်သိုးချေးအပူချိန်၊ C / N အချိုး၊ pH တန်ဖိုး၊ အောက်စီဂျင်နှင့်အတည်ပြုခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
၅။ ဆွေးသည် ၃ ရက်အပူချိန်မြင့်တက်ခြင်း၊ ၅ ရက်အနံ့မရှိခြင်း၊ ၉ ရက်လျော့ရဲခြင်း၊ ၁၂ ရက်မွှေးရနံ့များနှင့် ၁၅ ရက်ကြာပြိုကွဲခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
က။ တတိယမြောက်နေ့တွင်ဆွေးပုံအပူချိန်သည် ၆၀ ℃မှ ၈၀ r အထိမြင့်တက်လာသဖြင့် E. coli၊ ဥနှင့်အခြားအပင်ရောဂါများနှင့်အင်းဆက်ပိုးမွှားများကိုသေစေနိုင်သည်။
ဂ။ ကိုးရက်မြောက်သောနေ့၌ဆွေးသည်အဖြူ hyphae ဖြင့်ဖုံးအုပ်။ ခြောက်သွေ့သွားသည်။
သင်ပြိုကွဲပျက်စီးနေသောမြေ comp ဇာမြေ comp ဇာကိုလုပ်သည့်အခါ၎င်းကိုသင့်ဥယျာဉ်၊ ခြံ၊ ဥယျာဉ်တွင်ရောင်းချနိုင်သည်သို့မဟုတ်သင်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန်များသို့မဟုတ်အမှုန်များပြုလုပ်လိုပါကဆွေးမြေ in ဇာရှိသင့်သည်။ နက်ရှိုင်းသောအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှု။
သိုးချေးစီးပွားဖြစ်အော်ဂဲနစ် Granules ထုတ်လုပ်မှု
ဆွေးပြီးနောက်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာကုန်ကြမ်းကုန်ကြမ်းသို့စလှေတျတျော Semi- စိုစွတ်သောပစ္စည်း crusher နှိပ်စက်ရန်။ ထို့နောက်လိုအပ်သောအာဟာရဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီရန်သန့်စင်သောအခြားဒြပ်စင်များ (သန့်ရှင်းသောနိုက်ထရိုဂျင်၊ ဖော့စဖရပ်ရတ်ပင်အောက်ဆိုဒ်၊ ပိုတက်စီယမ်ကလိုရိုက်၊ အမ်မီနီယမ်ကလိုရိုက်စသည်) ကိုထည့်ပါ။ အသုံးပြုပါအမျိုးအစားအသစ်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာ granulator အမှုန်သို့ပစ္စည်းများ granulate ရန်။ အမှုန်အခြောက်များနှင့်အအေး။ အသုံးပြုပါScreener စက် စံနှင့်အရည်အချင်းမရှိသော granules ခွဲခြားစေရန်။ အရည်အသွေးပြည့်ထုတ်ကုန်များကိုတိုက်ရိုက်ထုပ်ပိုးနိုင်သည်အော်တိုထုပ်ပိုးစက် နှင့်အရည်အချင်းမရှိသော granules re-granulation များအတွက် crusher သို့ပြန်သွားပါလိမ့်မည်။
သိုးမြေ sheep ဇာမြေသြဇာဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကို composting- crushing- mixing- granulating- ခြောက်သွေ့ခြင်း-အအေးခံခြင်း - ထုပ်ပိုးခြင်းသို့ခွဲခြားနိုင်သည်။
သင့်ရွေးချယ်မှုအတွက်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလမ်းကြောင်း (အသေးစားမှအကြီးစားအထိ) ကွဲပြားခြားနားပါသည်။
၁ ။ သိုးချေးအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာပြိုကွဲ နှေးကွေးသောကြောင့်၎င်းသည်အခြေခံဓာတ်မြေသြဇာအတွက်သင့်လျော်သည်။ ကောက်ပဲသီးနှံများအပေါ်အထွက်နှုန်းတိုးစေသည်။ ပူပြင်းတဲ့အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာပေါင်းစပ်တာကပိုကောင်းတယ်။ သဲနှင့်စေးကပ်လွန်းသောမြေဆီလွှာကို အသုံးပြု၍ မြေသြဇာကောင်းသောတိုးတက်မှုကိုရရှိနိုင်ပါသည်။
၄ င်းသည်ကောက်ပဲသီးနှံမိုးခေါင်မှုဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း၊ အအေးခံခြင်း၊
post အချိန်: ဇွန် -18-2021